कांग्रेस कास्की क्षेत्र न. एक चुनाव लक्षित छलफलमा - Prime News Nepal
कांग्रेस कास्की क्षेत्र न. एक चुनाव लक्षित छलफलमा
नेपाली कांग्रेस कास्की क्षेत्र न. एक ले चुनाव लक्षित छलफलमा जुटेको छ । शनिबार पोखरा पोखरा २८ डाँडा गाउँमा नागरिकसँग कांग्रेस संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
कांग्रेसले समस्या सुन्ने मात्र नभई समाधानतर्फ पनि जुट्ने उनले सुनाए । उनले डाँडागाउँ बासिलाई आफ्नो मनमा लागेका समस्या निर्धक्क बताउन समेत अनुरोध गरे । उनले जनताका सारा समस्या सुनेर सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने बाँचा समेत गरे ।
यस्तै, कार्यक्रममा विकास गुरुङ, सुरजजंग राणा, सरु नेपाली, प्रयागराज भण्डारी, श्रीकृष्ण लामिछाने, डाल्डादेवी भुजेल, विश्वरमण अधिकारी, कृतिबल्लब त्रिपाठी लगायतले बोलेका थिए । आफ्ना समस्या सुनाएका आएका डाँडा गाउँ बासिले खानेपानीको चर्को समस्या रहेको बताएका थिए । जनताका सारा समस्या सुनि रहेका नेताहरुले समस्या सम्बन्धित निकायसमक्ष पु¥याउने बाँचा गरेका थिए ।
कार्यक्रममा डाँडागाउँबासिको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । उपस्थित सबैले आ आफ्ना समस्या सुनाएका थिए । कार्यक्रमको संयोजन गमप्रसाद बिकले गरेका थिए । ज्येष्ठ नागरिक गंगाराम सुनार र टिकाराम विकलाई बुद्धबहादुर दमै साइलाले नौमती बाजा दिने समेत घोषणा गरेका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता कास्की कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति राजेन्द्रमणी लामिछानले गरेका थिए भने संचालन क्षेत्रीय सचिब सरोज केसी ले गरेका थिए